ဦးလှရွှေ(ခ)ဦးအောင်သာ (ဘိုကလေး၊ ငွေသောင်ယံ၊ မရမ်း/ကျီးပင်စု) - MoeMaKa Media
Home / Culture / History / Thiha Latt / U Hla Shwe / ဦးလှရွှေ(ခ)ဦးအောင်သာ (ဘိုကလေး၊ ငွေသောင်ယံ၊ မရမ်း/ကျီးပင်စု)
ဦးလှရွှေ(ခ)ဦးအောင်သာ (ဘိုကလေး၊ ငွေသောင်ယံ၊ မရမ်း/ကျီးပင်စု)
Culture, History, Thiha Latt, U Hla Shwe
(ကိုယ်တိုင်ရေး ဘ၀အကျဉ်း) မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၂၁
ကိုသီဟလတ်၏ မှတ်စု - ဦးလှရွှေ(အောင်သာPPP) ဇူလိုင်၁၅၊ ညနေ ၇နာရီ ၁၇ မိနစ် မှာဆုံးသွားပါပြီ။
သူ့ဇနီး အန်တီဒေါ်ခင်မာအေးက (၁၁-၄-၂၀၀၆)မှာဆုံးပါတယ်၊ ၂၀၁၂ လောက်မှာ ဦးလှရွှေ ကကျွန်တော့်ကို မိတ္တူကူးထားတဲ့ စာရွက် ၃ ရွက်ပေးပါတယ်၊ သူ့ကိုယ်သူစိတ်မချတော့လို့ထင်ပါတယ်။ သူ့ဆန္ဒတွေဖြည့်‌ဖို့ အခြေအနေက‌မပေးတော့၊ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ သူ့စာကိုဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ (စာထဲကအတိုင်း ဦးလှရွှေမွေးနေ့က မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၉ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ရက်ဆိုရင် ၁၄-၁၁-၁၉၃၇ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
၁။	လူမှုရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဘဝဖြစ်စဉ်အကျဉ်း
ဖျာပုံခရိုင်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ကျီပင်စုကျေးရွာဇာတိ။
အဖ- ဦးချစ်ညွန့် (အလုံ၊ မုံရွာ၊ ကံကြီးရွာ)၊ အမိ- ဒေါ်ကြွေ (တိုက်ကြီး၊ ဘောလယ်ကျွန်း)တို့က ၁၂၉၉ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၂) ရက်နေ့တွင် မွေး၊ (၁၄-၁၁-၃၈)၊ ဇာတာနာမည်- အောင်ခင်ညွန့်။ မိဘများ- လယ်ကူလီများဖြစ်။
မိမိ (၆) နှစ်သား၊ စစ်အတွင်း အမေ ဆုံး၊ အဖေက ဂျပန်ချွေးတပ်ထဲ ပါသွား။ စစ်အပြီး အဖေ ရွာပြန်ရောက်။ မိမိကိုခေါ်ပြီး ဘိုကလေး တက်လာ။ နေစရာ၊ ကျွေးစရာ မရှိလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ထား။ မွေးချင်း— ကျား-၂၊ မိမိ အကြီး။ အဖေ တတိယအိမ်ထောင်များ ထူထောင်၊ ပရဆေးရောင်း။ ၁၉၆၈ လောက်မှာ ချောင်လည်လာ။
ပညာရေး— ၁၉၄၆-၄၇၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ‘အ’သုံးလုံးသင်။
၁၉၅၀-၅၁ မှာ၊ မြို့လယ်ဓမ္မာရုံ အစိုးရမူလတန်းကျောင်းမှ မူလတန်းအောင်။
၁၉၅၁-၅၇ မှာ ၁၀ တန်းအောင်၊ ဘိုကလေး အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း။
၁၉၅၈-၆၁ မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာတန်း (သမိုင်း သုံးဘာသာတွဲ) အောင်။ ဥပဒေဝိဇ္ဇာတန်း ဆက်တက်၊ မပြီး။
ကျောင်းစရိတ်ရဖို့ လူငယ်သိပ္ပံ(ညကျောင်း) လှည်းတန်း၊ စံရိပ်ငြိမ်မှာ JAT လုပ်။
၁၉၆၂၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့၊ ကျောင်းသူခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်မာအေး(ပအို့ဝ်၊ တောင်ငူ) နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့။
၁၉၆၂ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့၊ ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံဖြစ်၊ ဝရမ်းပြေးနေရ။ (၁၁-၆-၆၃) မှာ လွတ်-ငြိမ်း အမိန့်ထွက်။ မိသားစုနဲ့ ပြန်ဆုံရ။ B.L. ဆက်တက်တက်။ ဇနီးက D.T တက်။ ကျားစံပြကျောင်း၊ ကမာရွတ်၊ ဝင်းပညာရိပ်သာ၊ သာကေတတို့မှာ SAT လုပ်။
၁၉၆၄၊ ကမာရွတ် (၂) ကျားစံပြ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာ။
၁၉၆၃၊ Peace Talk ပျက်။ ထင်ရှားတဲ့ အခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ A.S အတွင်း ပါခဲ့။ ၁၉၆၃-၁၉၇၂ အထိ။
ရွှေလဝင်း စဆရ၊ အဆင့် ၂/၃ အတွင်း ၁၉၆၉၊ အောက်တိုဘာထဲမှာ အဝိုင်းခံရ၊ ဖမ်းမိ။ စစ်ကြောရေးလုပ်၊ မြောင်းမြစစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ၃ နှစ် ချုပ်ထား။ ရန်ကုန် MI-6 (ထောက်-၆) ထံ လွှဲ၊ ၆ လချုပ်၊ စစ်မေး၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မလုပ်လို့ ဆက်ချုပ်။ ၂၂-၁-၁၉၇၂ နှစ်ဦးကျမှ လွှတ်။
၁၉၇၂၊ ဧပြီမှာ မိသားစုနှင့် ပြန်ဆုံခွင့်ရ။
၁၉၇၂ မှ ၁၉၉၈ နှစ်ဦးအထိ ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့။
၁၉၈၅ မှာ HGP ဖြေဆိုအောင်မြင်။
သား - ၂၊ သမီး-၁။ အခု အားလုံး အိမ်ထောင်သည်များ။ စုစုပေါင်း မြေး ၇ ယောက်၊ ကျား (၃)၊ မ (၄)။
ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်မာအေး (၁၁-၄-၂၀၀၆) မှာ နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့။ အခု သမီးငယ်နှင့် သူ့သမီး မြေးကလေးများနှင့် အတူနေ။
၁။	၁၉၅၃-၆၃ အထိ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့။
၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစပြီး ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါခဲ့။
၁၉၅၄-၅၆ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်။
ရန်ကုန်-ကြည့်မြင်တိုင် အနောက်တိုင်းကျောင်း ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ G.S အတွင်းရေးမှူး။
၁၉၅၆-၅၇၊ R.U၊ ထီးတန်းကောလိပ်ရောက်။
ထီးတန်းကျောင်းဆောင် သဟာယနှင့် စာဖတ်အသင်း Social And Reading Club (S and R) အတွင်းရေးမှူး။
ထီးတန်းကောလိပ် ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦး စည်းရုံးရေးမျူး။ R.U, The Student United Front (SUF) တာဝန်ခံစည်းရုံးရေးမှူး။
၁၉၅၇-၅၈၊ ပဲခူးဆောင် (S and R), G.S ၊ မန္တလေးဆောင် SUF ကောင်စီဝင်။
၁၆၅၉-၆၀ S.R. အဖွဲ့ချုပ်၊ G.S ၊ R.U ကျောင်းဆောင်ကော်မတီ (တကသ) ကိုယ်စားလှယ်။ (ဦးခွန်ဝင်းလှိုင်နှင့်အတူ)
တကသ အမှုဆောင် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ။
ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညိုဝင်း)
All Burma Federation of Students’ Union (ABSFU)၊ ၆ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်မှ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရ။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပျက်၊ ၁၉၆၃ နိုဝင်ဘာ (၁၄) မှာ တက္ကသိုလ်များပိတ်ကြောင်း စစ်အစိုးရက ကြေညာခဲ့။ မိန်းကလေးဆောင်များ အပါအဝင် အာဏာဖီဆန်မှုတိုက်ပွဲကို ၂၂-၁၁-၆၃ နေ့အထိ ခေါင်းဆောင်ခဲ့။ (မိမိ၊ ကိုလှကြည်(ဘိုကလေး)၊ ကိုထွန်းကြည်(ဆေးသိပ္ပံ)တို့ နှင့်အတူ) ရပ်တည်ခဲ့)။ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့် R.U နယ်မြေမှ ဆုတ်ပေးခဲ့။
၁၉၆၃ ခုနှစ် (၂၂-၁၁-၆၃)၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပျက်အပြီး လူဖမ်းပွဲ ကျင်းပနေသဖြင့် အခြား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ A.S အတွင်း ပါဝင်ခဲ့။
၁၉၆၃ မှ ၁၉၇၂ အထိ A.S အတွင်း ပါခဲ့။
၁၉၆၃ မှ ၁၉၇၂ အထိ A.S ထဲမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့။
၃။	CBP နှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုများ
၁၉၅၃ တွင် CP-UG ဖျာပုံခရိုင်နှင့် အဆက်အသွယ်ရ၊ လေ့လာရေးအစုဝင် ဖြစ်လာ။
R.U တက်တဲ့အခါ R.U-UG အစုထံ လွှဲပေးခဲ့။
၁၉၅၇-၅၈ မှာ PM ဖြစ်လာ။
၁၉၅၇-၅၈၊ ထီးတန်း Cell ၊ ၅၈-၅၉ Central Hall ၊ ၁၉၅၉-၆၀ New Hall Cell များရဲ့ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ယူရ။
၁၉၆၂-၆၃ မှာ ကျောင်းသားအစု Leading Cell Member (L.C.M.) ဖြစ်လာ။
၂၂-၁၁-၆၃ တွင် အခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၄ ဦးနှင့်အတူ C.P.B ဖျာပုံခရိုင်သို့ ဆုတ်ခွာခဲ့။
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့တွင် CPB Delta ROC ရုံးသို့ ရွှေ့ခဲ့။ D.ROC စခန်းတွင် (အစိုးရနယ်မြေ) GCA မှ ဆုတ်ခွာလာသည့် လုပ်ငန်းစုအမျိုးမျိုးမှ ရဲဘော်များ တပ်စုတစုစာ စုစည်းမိ။ အထူးစစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်ကြရ။
၁၉၆၆ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ရန်သူ့ဒေသ အထူးကေဒါများ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ပြီး တာဝန်ခွဲဝေရေး အစည်းအဝေး ဆက်လုပ်။ ကျရာဒေသများသို့ ခရီးထွက်ကြရ။
မိမိက မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ TOC အဆင့်နှင့် ဖျာပုံခရိုင် ပါတီရုံးအုပ်တာဝန်ယူရ။ ၁၉၆၆-၆၈ အထိ ရုံးအုပ်။
၁၉၆၈-၆၉ ခုနှစ်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်ခွဲ၊ မြို့နယ်မှူး။ ငွေသောင်ယံဒေသ (ကေအန်ယူနဲ့) မြို့နယ် မဒညတ ပူးတွဲကော်မတီ (အလံနီ)နဲ့ မြို့နယ်သုံးပါတီ ပူးတွဲကော်မတီဝင် တာဝန်များယူခဲ့။
၁၉၆၈-၇၀ အတွင်း၌ ဖျာပုံခရိုင်၊ ထော်ပိုင်ဒေသအတွင်း၊ ရွှေလင်းယုန် မိုးဟိန်းစစ်ဆင်ရေးများ၊ ရွှေလဝင်းစစ်ဆင်ရေးများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ။
၁၉၆၉ ခုနှစ်အကုန်မှာ DOC အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးကျော်နဲ့ ခရိုင်တပ်မှူး ဗိုလ်ဆန်းတို့က စတင်လက်နက်ချသွားကြ။
၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ မှာ ထော်ပိုင်အဖျား၊ ၁၃ ရေးရိုးခွင်မှာ မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြလင်း အဖွဲ့နှင့် မိမိတပ်စုပါ ဝိုင်းမိ၊ အညံ့ခံရ။ မြောင်းမြစစ်ကြောရေးစခန်းမှာ L.A နှင့်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စများ စစ်ဆေးအပြီး ၃ နှစ် ချုပ်ထားခံခဲ့ရ။ ၂၂-၃-၇၂ ခုနှစ်ကျမှ MI-6 က လွှတ်ပေးခဲ့။
၁၉၅၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (၇-၇-၂၀၀၆) အထိ ထောင် ၆ ကြိမ်၊ ၂၆ နှစ်နီးပါး ထောင်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
၁။	၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာထဲမှာ ရဲဘော်လှကြည်နဲ့အတူ ဖျာပုံခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ညီလာခံသို့ သွားရောက်ခေါင်းဆောင်ရင်း ပုဒ်မ (၅) ဖြင့် အဖမ်းခံရ။ စစ်အချုပ်မှာ ၆ လခန့် ချုပ်ထားခံခဲ့ရ။
၂။	၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ မှာ ထော်ပိုင် စစ်မြေပြင်မှာ ဝိုင်းပိတ်အဖမ်းခံရ။ ၃ နှစ်ခန့် ချုပ်။
၃။	၁၉၇၆ ခုနှစ်အတွင်း Rgn UG နှင့် အဆက်ရ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ A.S ပြန်လုပ်ရန် (အလယ်/ဗဟိုနှင့် ဆက်သွယ်၊ ဇော်ဦး ဖော်ခဲ့။)
၁၉၈၂ မတ်လ ၂၂ မှ ၁၉၈၅ မတ်လအထိ ပုဒ်မ ၅(ည)နဲ့ ၃ နှစ်။ UG ခေါင်းဆောင် ဇော်ဦး (ဖမ်းမိ) ဖော်တာကြောင့် လူ ၂၇၀ ခန့် အဖမ်းခံရ။ စစ်ကြောရေးမှာ ၇၀ ကျော်လွတ်။ တရားခံ ၇၆ ယောက်၊ အနှစ် ၂၀၊ ၁၀၊ ၅၊ ၃ နှစ်စီ ထောင်ကျခံကြရ။ ပုဒ်မ- ၁၂၂(၁)၊ ၅(ည)နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချ။ မိမိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရ။ ထောင် ၃ နှစ်ကျ၊ အပြည့်နေရ။
၄။	၁၉၇၆ ဝါဝါထွန်း သူလျှိုလုပ်၊ သတင်းပေး၊ ၂၃ ဦး၊ ဘာအထောက်အထားမှ မရ၍ ပုဒ်မ ၁၀(က) ဖြင့် ၃ နှစ် ပိတ်ထားခဲ့။ ၁၅-၇-၈၈ မှာ ပြန်လွှတ်ပေး။ ၈၈ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်နေ။
၅။	၁၉၈၉ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဖမ်း။ စစ်ခုံရုံးဖြင့် ချ (၇) နှစ်။ မန္တလေးထောင်ဟောင်း (သီးသန့်)နဲ့ အိုးဘိုထောင်သစ်မှာ နေရ။ ၆ နှစ်ကျော် နေရ။
၆။	ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ပြုစုရာမှာ ပါဝင်လို့ ၂၀-၂-၈၉ မှာ သခင်အုန်းမြင့် အပါအဝင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းများနှင့်အတူ အဖမ်းခံရ။ အထူးရုံးဖြင့်ချ။ ပုဒ်မ ၅(ည)၊ ပုံနှိပ် ၁၇/၂၀ ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချ။ ၁၄ နှစ်တည်။ ထောင်ထဲမှာ ၉ နှစ်နီးပါး နေရ။ ၄၀၁(၁) သုံးကြိမ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်း၊ ငြင်းပယ်ခဲ့။ ၇-၇-၂၀၀၆ မှာ ပြန်လွှတ်ပေး။
၇။	ဇနီး ဒေါ်ခင်မာအေး၊ ၁၉၆၇ ဇူလိုင် ၂၃၊ ဘခက်(မြခက်ရှိန်) ဖော်လို့ ရေကြည်အိုင် ထောက်လှမ်းရေးစခန်းမှာ ၄ နှစ်ကျော် ထိန်းသိမ်းခံရ။ Electric Shock ဖြင့် ၆ လခန့် ညှဉ်းပန်းခံရလို့ မိန်းမဘဝ ဆုံးရှုံးသွား။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်တော့။
၁၉၉၃ မှာ အမျိုးသားညီလာခံ ဆန့်ကျင်တဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ရာမှာ ပါလို့ ၅(ည) ဖြင့် ၃ နှစ် ထောင်ချခဲ့။
၈။	သားကြီး ဆက်အောင်နိုင်(၄၃ နှစ်)။ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုထဲ ပါလို့ ၅(ည) ဖြင့် ထောင် ၃ နှစ်။
၁၉၉၅ (၄ နှစ်)၊ ၁၉၉၈ – ပုဒ်မ ၅(ည)၊ ပုံနှိပ် ၁၇/၂၀ နဲ့ စွဲချက်တင်၊ ထောင် ၂၁ နှစ် ကျခံရ။ အိမ်ထောင်သည်။ သမီးတယောက် အဖေ၊ ထိုင်းဘက်ထွက်၊ ဘယ်ရောက်မှန်း မသိ။
၉။	သားငယ် ဆက်အောင်ခိုင် (၄၂ နှစ်)။ ၂၅-၉-၈၈ မှာ ထိုင်းထွက်။ ABSDF တပ်ရင်း ၂၀၆ တပ်ရင်းမှူး၊ မိုးသီးဇွန် အုပ်စု။ ၁၉၉၂ ထိုင်းမှာ အိမ်ထောင်ကျ။ USA ထွက်ခွင့်ရ။ အိမ်ထောင်သည်။ သား ၃ ယောက်။ အခု USA ကွန်နီတင်ကပ်မှာရှိ။ အဆက်အသွယ် မရ။
၁၀။	သမီးငယ် နေခြည်ဦး(ခ)မေဇွန်ဦး ရဲ့ ခင်ပွန်း မျိုးအောင်နိုင်(ခ)အောင်နိုင် (မင်းကိုနိုင်ရဲ့ ညီတဝမ်းကွဲ)။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာလှုပ်ရှားမှုထဲ ပါခဲ့။ မင်းကိုနိုင်နှင့်အတူ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ကျခံနေရ။ ကလေးထောင်မှာရှိ။ သမီးငယ် ၈ နှစ်သမီးရှိ။
မိမိအသက် အခု ၇၄ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီ။ ထောင် ၆ ကြိမ်၊ ၂၆ နှစ်နီးပါး ထောင်ကျခဲ့။ အိမ်ထောင်သက် ၄၆ နှစ်အတွင်း ဇနီးသည်၊ မိသားစုနှင့် နှစ် ၃၀ အတူမနေခဲ့ရ။
၅။	ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ၁၀(က) ဖြင့် ၃ နှစ်ချုပ်ထား။ ၁၅-၇-၈၈ နေ့မှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဦးခင်မောင်မြင့်၊ ဦးညိုဝင်း၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း (ခရမ်း NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)တို့နှင့်အတူ စစ်ပြီးခေတ်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေတ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအစု ဖွဲ့စည်းပြီး ၈၈ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲ ပါဝင်ခဲ့။
၇၀ နှစ်ပြည့်အလွန် နိုင်ငံရေးထောင်ကျများအစုနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြ။
၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီး ၉ ခုရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့် ကျောင်းသားထုအစည်းအဝေးကြီးတွင် ဖိတ်ကြားချက်အရ (ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ၆ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံကြီးက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သည့် ABFSU အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေဖြင့်) တကသ မြက်ခင်းပြင်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့။ ၂၈-၈-၈၈ တကသ အဆောက်အဦဟောင်း မြက်ခင်းပြင် တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ မိန့်ခွန်းကို ဥက္ကဋ္ဌ မင်းကိုနိုင်ထံ ပေးအပ်ခဲ့။
ဗိုလ်အောင်ကြီးက ၂၄ ဩဂုတ်လ၊ စမ်းချောင်း ပဒုမ္မာကွင်းမှာ မိန့်ခွန်းပြော။ ဒေါ်စုက ၂၆-၈-၈၈ ရွှေတိဂုံအနောက်မုခ် လူထုအစည်းအဝေးကြီးမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့။ ၁၈-၉-၈၈ မှာ စစ်တပ်က တတိယအကြိမ် အာဏာသိမ်း။
၂၄-၄-၉၂ မှာ ဗိုလ်စောမောင်ကို ဗိုလ်သန်းရွှေက စတုတ္ထအကြိမ် အာဏာသိမ်းခဲ့။
၁-၁၁-၈၉ ခုနှစ်မှာ ဦးခင်မောင်မြင်နဲ့အတူ ပီသုံးလုံးပါတီ ထူထောင်ခဲ့။ ပီသုံးလုံး G.S တာဝန်ယူခဲ့။
(၂၈-၂-၈၉၀ မှာ (ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်များအဖွဲ့ - ဒ.မ.ဖ) ကို ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁၇ ပါတီနဲ့ စုစည်းဖွဲ့စည်းခဲ့။
(ဒ.မ.ဖ) ၁၇ ပါတီ လူမျိုးစုအဖွဲ့ချုပ် ၂၂ ပါတီ၊ ဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့ ဒီ-ချုပ်တို့ စုစည်းပြီး ‘၄၁ ပါတီ မဟာမိတ်အဖွဲ့’ကို ၆-၆-၈၉ မှာ ဖွဲ့စည်း။ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးပါ E.C ဖွဲ့။ ဒီ-ချုပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းဝင်၊ ဒ.မ.ဖ မှ ဗိုလ်အောင်နိုင်၊ ဦးလှရွှေ၊ ဆရာဒွန်း၊ မူဆလင်ပါတီစုမှ ဦးအေးသာအောင်၊ ခွန်တင်ရွှေ၊ ဦးကြီးမြင့်(ကျူရှင်ဆရာ)၊ ဦးစိုးမင်း(ဗလစ) တို့ ပါ။
တပ်ပေါင်းစုရုံးအဖွဲ့ - ဦးလှရွှေ၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးအေးသာအောင်၊ ခွန်တင်ရွှေ၊ ဦးကြီးမြင့်တို့ ပါဝင်ကြ။
၂၁-၆-၈၉ ရက်နေ့မှာ NLD HQ ရုံးမှာ ‘အာဏာဖီဆန်ရေး’ ကြေညာချက် ၈၇-ပါတီ လက်မှတ်ထိုး ကြေညာရာမှာ ပီသုံးလုံး ကိုယ်စား လက်မှတ်ထိုးခဲ့။
၂၅-၆-၈၉ နေ့ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှာ ဦးလှရွှေ၊ ဦးခင်မောင်မြင့်(ပီသုံးလုံး)၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်၊ NLD မှ ဦးဝင်းတင်၊ မင်းသားကြီး ဦးအောင်လွင်၊ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ နောင်ရိုးဦးတင်ဝင်း(မာလာ) တို့ စတင်ဖမ်းဆီးခံရ။
၂၀-၇-၈၉ ရက်နေ့ ဒေါ်စု၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွသူများကို ဖမ်းဆီးထောင်ချ ထိန်းသိမ်းခဲ့။
မိမိကို ၂၂-၁၂-၈၉ မှာ ရုံးတင်။ ပုဒ်မ ၅(ည) နဲ့ စစ်ခုံရုံး - ၅(က)၊ ၇ နှစ် ထောင်ကျ။
မန္တလေးထောင်ဟောင်း၊ (တွဲဘက်) နန်းတွင်း။ ထောင်သစ်၊ အိုးဘိုရွာ(မတ္တရာမြို့နယ်)တို့မှာ ၆ နှစ် ၁ လကြာ နေခဲ့ရ။ ၂၅-၅-၉၅ မှာ ထောင်မှလွတ်။
၆။	အတွေ့အကြုံပေါ်မှ ရရှိသည့် ခံယူချက်များ
၁။	သမိုင်းခေတ်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိရမယ်။
၂။	ပြည်သူလူထုကြီးအပေါ်မှာ သစ္စာရှိရပါမယ်။
၃။	မိမိကိုယ်ပေါ်မှာ သစ္စာရှိရပါမယ်။
၄။	(လက်တွေ့အရ) MSC အပေါ်မှာ သစ္စာရှိရပါမယ်။ (MSC - မာ့ခ်က်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့ CPB)
ဒီ ‘သစ္စာလေးပါး’ မမြဲရင် (အသက်ရှင်ရက် သေနေတာပါပဲ)လို့ ခံစားမိတယ်။
(၁)	သေရင် - ကွယ်လွန်သူ ဦးချစ်ညွန့်၊ ဒေါ်ကြွေ (မရမ်း-ကျီးပင်စု)၊ ဘိုကလေးမြို့တို့၏ သားကြီး ဦးလှရွှေ(ခ)ဦးအောင်သာ (ဘိုကလေး၊ ငွေသောင်ယံ၊ မရမ်း/ကျီးပင်စု)လို့ ဖော်ပြပါ။
(၂)	ဖြစ်နိုင်ရင် - PPP အလံလွှမ်း၊ ထည့်သင်္ဂြိုဟ်ပါ။ ခင်မာ့ ဓာတ်ပုံတပုံ ထည့်ပေးလိုက်ကြပါ။
ဦးလှရွှေ(ခ)ဦးအောင်သာ (ဘိုကလေး၊ ငွေသောင်ယံ၊ မရမ်း/ကျီးပင်စု) Reviewed by MoeMaKa on 12:18 PM Rating: 5